Global Aawaj | कोभिड-१९ जस्तै लक्षण भएको 'स्क्रब टाइफस' रोग, कसरी बच्ने ? कोभिड-१९ जस्तै लक्षण भएको 'स्क्रब टाइफस' रोग, कसरी बच्ने ?
कोभिड-१९ जस्तै लक्षण भएको ‘स्क्रब टाइफस’ रोग, कसरी बच्ने ?
१९ भाद्र २०७८ 1:41 pm
काठमाडौं । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले कोभिड- १९ सँग मिल्दोजुल्दो लक्षण भएको ‘स्क्रब टाइफस’ रोग देखिन थालेको जनाएको छ । मन्त्रालयका सहप्रवक्ता डा. समिरकुमार अधिकारीले कोभिड- १९ का लक्षणसँग मिल्दोजुल्दो रोग स्क्रब टाइफस देखिन थालेको जनाएका छन् ।